Blackstar စျေး - အွန်လိုင်း BSTAR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Blackstar (BSTAR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Blackstar (BSTAR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Blackstar ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BSTAR – Blackstar
Market ကဦးထုပ်: $54 467.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Blackstar တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Blackstar များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlackstarBSTAR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000003BlackstarBSTAR သို့ ယူရိုEUR€0.000003BlackstarBSTAR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000002BlackstarBSTAR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000003BlackstarBSTAR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00003BlackstarBSTAR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00002BlackstarBSTAR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00007BlackstarBSTAR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00001BlackstarBSTAR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000004BlackstarBSTAR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000004BlackstarBSTAR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00007BlackstarBSTAR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00002BlackstarBSTAR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00002BlackstarBSTAR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000238BlackstarBSTAR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.000537BlackstarBSTAR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000004BlackstarBSTAR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000005BlackstarBSTAR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0001BlackstarBSTAR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00002BlackstarBSTAR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000339BlackstarBSTAR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.00377BlackstarBSTAR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.00123BlackstarBSTAR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000233BlackstarBSTAR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00009
BlackstarBSTAR သို့ BitcoinBTC0.0000000003 BlackstarBSTAR သို့ EthereumETH0.000000008 BlackstarBSTAR သို့ LitecoinLTC0.00000006 BlackstarBSTAR သို့ DigitalCashDASH0.00000004 BlackstarBSTAR သို့ MoneroXMR0.00000004 BlackstarBSTAR သို့ NxtNXT0.000248 BlackstarBSTAR သို့ Ethereum ClassicETC0.0000005 BlackstarBSTAR သို့ DogecoinDOGE0.000918 BlackstarBSTAR သို့ ZCashZEC0.00000004 BlackstarBSTAR သို့ BitsharesBTS0.0001 BlackstarBSTAR သို့ DigiByteDGB0.000102 BlackstarBSTAR သို့ RippleXRP0.00001 BlackstarBSTAR သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000001 BlackstarBSTAR သို့ PeerCoinPPC0.00001 BlackstarBSTAR သို့ CraigsCoinCRAIG0.00145 BlackstarBSTAR သို့ BitstakeXBS0.000136 BlackstarBSTAR သို့ PayCoinXPY0.00006 BlackstarBSTAR သို့ ProsperCoinPRC0.000399 BlackstarBSTAR သို့ YbCoinYBC0.000000002 BlackstarBSTAR သို့ DarkKushDANK0.00102 BlackstarBSTAR သို့ GiveCoinGIVE0.00689 BlackstarBSTAR သို့ KoboCoinKOBO0.000725 BlackstarBSTAR သို့ DarkTokenDT0.000003 BlackstarBSTAR သို့ CETUS CoinCETI0.00919